Sidee loo Ciyaaraa Taxi Wareegista Ciyaarta
Suugaanta Ciyaaraha iyo Waxqabadyada
Taxi Cab wuxuu kor u qaadi karaa cayaaraha seddex ilaa lix ciyaartoy. Waa ciyaar xiiso leh oo loogu talagalay dhinacyada ama waxaad u isticmaali kartaa sida fasalka fasalka , riwaayadaha, ama horumarinta fasallada. Waxay ku habboon tahay da 'walba oo dhan waxaana lagu ciyaari karaa carruurta ama xubnaha fayow ee kooxaha wanaajinta. Iyada oo aan loo eegin waxa heerka, waxay ku raaxaysan tahay inay daawato oo xiiseyso inay fuliso.
Sidee loo Ciyaaraa Canshuurta Taksiga
Xulo mid ka mid ah riwaayadaha darawalka gaariga iyo labo ama kabadan oo rakaabka ah.
U samee hal kursi oo ah "darawalnimada taksiga" iyo kursiyo dhowr ah oo loogu talagalay kuraasta rakaabka.
Mid ka mid ah fuliyaha ayaa doorbidaya darawalka darawalka. Isaga / ayada waxay bilawday iyadoo la raacayo darawalnimada. Inaad xor u noqoto inaad sameysid dabeecad darawali ah oo cabsan, sharaf leh. Kadib daqiiqado yar oo baabuur ah, kaamiruhu wuxuu macaamil u yahay.
Rakaabka ayaa ku riixaya gadaasha darbiga. Hada, halkan waa halka uu ciyaarta bilaabmayo. Dhaqanka labaad ee cayaarta doorka rakaabka waa inuu leeyahay shakhsiyad gooni ah. Tani waa in lagu meeleeyo ka hor bilawga ciyaarta oo loo yaqaanno kuwa kale ee fuliya.
Gymmick waa in darawalku ka cabo sifooyinka shakhsiyadeed ee macaamiishiisa. Marka uu soo galo cusub (rakaab cusub) gala goobta, darawalka darawalka iyo rakaabyada kale waxay daboolaan shakhsiyadda / dabeecadda cusub. Rakaabka ayaa u sharaxaya darawalka halka ay u socdaan iyo waxa ay qorsheynayaan inay sameeyaan.
Ka dib markii rakaabku isdhexgalay, darawalku wuxuu bilaabi doonaa inuu ka dhaco macaamiishiisa. Marka rakaab la tuuro oo bannaanka ka baxo, qof waliba shakhsiyaddiisa ayuu u beddelaa markale, illaa dhammaadka, dabeecadda wadaha baabuurtu waa kali oo mar labaad shakhsiyan asalka ah.
Agaasime ama macallin ayaa laga yaabaa inay rabaan inay isticmaalaan saacad si ay u codsadaan marka rakaabka soo socda uu galo ama ka baxo cabirka si uu u ilaaliyo ciyaarta. Tani waa kala duwanaan kartaa. Haddii riwaayaduhu ay ku qoran yihiin liiska, maamuluhu wuxuu u oggolaan karaa in uu sii dheeraado. Haddii aysan ku fiicnayn dabeecad, agaasimaha ayaa codsan kara isbeddelka rakaabka ee ku xiga si uu u heysto ciyaarta si tartiib ah.
Shakhsiyaadka waxaa loo sii diyaargaroobi karaa agaasimaha ama macallinka ama waxaa loo qaadan karaa talooyinka dhagaystayaasha kahor bilawga ciyaarta.
Wakiilka Britishka ah oo qarsoodi ah.
Sheeko muusiko ah.
4-sano jirka ah.
Haweeney da 'weyn oo saaxiibtinimo ah.
Kooxo horumarineed oo horumarsan , mid kasta oo ka mid ah waxqabadka ayaa laga yaabaa inuu la yimaado shakhsiyadda rakaabka ee gaarka ah oo aan u soo bandhigin illaa ay ka soo galaan cabirka. Tani waxay keeneysaa in badan oo ka mid ah caqabadda dadka kale si ay u jaan qaadaan.
Kala-hadal kale waa inuu soo jeediyo talada dhageysiga inta lagu jiro ciyaarta. Xilliga ugu wanaagsan, way fiicnaan kartaa in loo dhiibo xubnayaasha dhagaystayaasha si ay ugu yeeraan shakhsiyadda rakaabka halkii ay ka heli lahaayeen dhawr qof oo ku tartamaya talooyin.
Xirfadaha Jilicsan ee loo Isticmaalay Taxi Wareware Improvement Game
Hawlgalkani wuxuu kobciyaa kartida awood u-qaadista. Sidee heestu u jilicsan karaa jiliciyaha qaabka cayaaraha kale? Sidee dhakhso ah ayuu jilaha u bedeli karaa dabeecadiisa? Waa maxay qaababka dareenka ay jilayaashu muujin karaan?
Macallimiinta iyo agaasimayaashu waa inay ku dhiirrigeliyaan dhagaxdooda inay isku dayaan shakhsiyaadka cusub iyo dareenka cusub ee suurtogalka ah. Ku raaxeyso ciyaarta oo ha ilaawin inaad siisid cabbie ah caaro wanaagsan.
29 Hagaajinta safarrada si aad u tijaabiso
Dejinta Fikradaha loogu talagalay Hagaajinta Hawlaha iyo Mustaqbalka Mushkiladaha
3 Cayaarta Dhaqanka Ku-saleysan ee Muusikada
"Waxaan halkan ku nimidnaa" Tiyaatarka Tiknoolajiyada Kooxda
"Santa's Lap" "Christmas Improv Game"
Saddex Erey oo Hagaajin
'Marka la fiiriyo xaaladaha' ee jilidda ardayda
3 Sheekooyinka Hagaajinta Ciyaaraha si loo horumariyo Xirfadaha 'Actors'
Tiyaatarka iyo Horumarinta Ciyaaraha Fasalka iyo Beyond
Cayaaraha Horumarinta tartanada
Sida loo Isku Qabo "Essuyer" (si aad u tirtirto)
Wacdiyadii 3aad - 'Wakhti Wanaagsan'
Sida loo sameeyo Dabka Yellow ama Golden
Fahmaan Mawduuca ugu Hore 'Adoo Muhiim ah'
Top 5 Sargaalka ugu Weyn Calaamadaha Titan
Waa maxay Dhaqdhaqaaqa Farshaxanka?
Badbaadada Kirishtaanka ee Kiristaanka ee Bilowga
Miyaad U Diideysaa Ilmo Nashiimo Ah?
Isticmaalidda Physic Quantum si "Dareemo" Jiritaanka Ilaah
The Legend of Urban ah ee Hook Man
Qaadashada Kuleejka Livingstone
Ma inaan labajibbaaran karaa?
Waa maxay Boqortooyada Ilaahay?
Ereyada Faransiiska ee Sababta iyo Saameynta
Waxyaabaha Aasaasiga ah ee Xaddidaya Waxtarka Iskuulka
Sida loola hadlo bilaha, maalmaha, iyo xilliyada Jarmalka
Asatru - Norse Heathens of Paganism casri ah
Ururinta Shahaadada Bilaashka ah: Dalladaha Daaqa
Niyadjabka iyo bogsashada guryaha ee Kyanite
Xaaladda Hadda ee Bariga Dhexe
Dawladdu waxay kaa caawin kartaa inaad iibsato 'Fixer-Upper' Home
Nasiibxumo Nasiib-darro ah oo ku fashilantay Hillary Email-ga
Waa Maxay Midnimada Mideysan ee Xisaabta?